Mwari Anoda Kuti Uve Pedyo Naye (Johani 6:44)
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mazatec (Huautla) Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Mwari Anoda Kuti Uve Pedyo Naye
“Hapana munhu angauya kwandiri kana Baba, vakandituma, vakasaita kuti auye.”—JOHANI 6:44.
CHINOITA KUTI VAMWE VASAVA NECHOKWADI: Pavanhu vanotenda muna Mwari, vakawanda vavo vanonzwa vari kure naye. Mumwe mukadzi wekuIreland anonzi Christina uyo aienda kuchechi vhiki imwe neimwe akabvuma kuti, “Ndaingomuona saMwari akasika zvinhu zvose. Asi ndaisamuziva. Handina kana pandakambonzwa ndiine ukama hwepedyo naye.”
ZVINODZIDZISWA NESHOKO RAMWARI: Jehovha haaregi kutibatsira patinenge tichinzwa tiri kure naye. Jesu akaenzanisira rudo rwatinoratidzwa naMwari achiti: “Kana mumwe munhu akava nemakwai zana uye rimwe rawo rikarasika, haangasiyi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe mumakomo akaenda kunotsvaka rarasika racho here?” Tinodzidzei? Jesu akawedzera kuti, “Saizvozvowo hachisi chinhu chinodiwa naBaba vangu vari kudenga kuti mumwe wevaduku ava aparare.”—Mateu 18:12-14.
Mumwe nemumwe “wevaduku ava” anokosha kuna Mwari. Mwari ‘anotsvaka’ sei vaya vanonzwa vari kure naye? Maererano nerugwaro rwune mashoko ari patangira nyaya ino, Jehovha anoita kuti vanhu vaswedere pedyo naye.
Mazuva ano ndivanaani vanoshanyira vanhu mumisha yavo uye munzvimbo dzinowanika vakawanda vachikurukura zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro paMwari?
Funga zvakaitwa naMwari achiita kuti vanhu vane mwoyo yakatendeseka vaswedere pedyo naye. Mumakore anenge 1 900 akapfuura, Mwari akatuma Firipi mudzidzi wechiKristu kuti anosangana nemukuru mukuru wekuItiopiya kuti akurukure naye zvairehwa neuprofita hwemuBhaibheri hwaiverengwa nemukuru mukuru wacho. (Mabasa 8:26-39) Pave paya, Mwari akarayira muapostora Petro kuti aende kumba kwemukuru mukuru weuto reRoma ainzi Koneriyasi, uyo akanga achinyengetera achishanda nesimba kuti anamate Mwari. (Mabasa 10:1-48) Mwari akatungamirirawo muapostora Pauro neshamwari dzake kuti vaende kurwizi rwaiva kunze kweguta reFiripi. Vakanosangana ne“munamati waMwari” ainzi Ridhiya, uye “Jehovha akanyatsovhura mwoyo wake kuti ateerere.”—Mabasa 16:9-15.
Pamienzaniso yese yatakurukura, Jehovha akava nechokwadi chokuti vaya vaimutsvaka vawana mukana wekumuziva. Mazuva ano ndivanaani vanoshanyira vanhu mumisha yavo uye munzvimbo dzinowanika vakawanda vachikurukura zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro paMwari? Vakawanda vangapindura kuti, “Zvapupu zvaJehovha.” Zvibvunze kuti, ‘Mwari angave achivashandisa kundibatsira kuva neukama hwepedyo naye here?’ Tinokukurudzira kunyengetera kuna Mwari kuti akubatsire kubvuma zvaari kuita kuti uve pedyo naye. *
^ ndima 8 Kuti uwane mamwe mashoko, ona vhidhiyo yakanzi Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri? iri pawww.jw.org.